Posted by သစ်နက်ဆူး at 9:38 AM
Moe Cho Thinn September 23, 2008 at 12:23 PM
အဘိုးဦးကျော်ဒင်ပြောတဲ့ ခံနိုင်သလောက် ဆက်ခံ၊ မခံနိုင်ရင် ငါ့ဆီ ပြေးလာခဲ့ ဆိုတာတော့ ကြိုက်သွားပြီ။ မခံနိုင်ရင် ပြန်ချပေါ့ကွ လို့ ပြောမလား မှတ်တယ်။ အင်း..ရန်ရှောင်တဲ့ သဘောပေါ့လေ။
အခုလို အရင်က မှတ်တေးထားတာတွေ ဒီလို စာရေးပြီး ရင်ဖွင့်လိုက်တော့ စိတ်ပေါ့ပါးသွားတာပေါ့။ အဲဒါ ဘလော့ဂ်လုပ်ခြင်း အကျိုးပဲ။
သိရ ခင်မင်ရတာ ၀မ်းသာပါတယ် မောင်လေးရေ။
... September 23, 2008 at 12:50 PM
Heartmuseum September 23, 2008 at 3:53 PM
ပုံရိပ် / Pon Yate September 23, 2008 at 6:51 PM
ကိုသစ်နက်ဆူးရေ ဖတ်ရတာ မချိုသင်း ပြောသလို တထိတ်ထိတ်နဲ့။ တခါတလေ တကယ့် အဖြစ်အပျက်တွေက ၀တ္ထုဇာတ်လမ်း လိုပဲ။ ကိုသစ်နက်ဆူးရဲ့ သတ္တိနဲ့ သတိကို ချီးကျူးပါတယ်။
ပုံရိပ် တွေးမိတာကတော့ ဘာသာရေးဆိုတာ ကျင့်တတ်မှပဲ။ အစွန်းရောက်လွန်းရင် ဘာဟာပဲ ဖြစ်ဖြစ်မကောင်းဘူး ပေါ့နော်။ တခါတလေ လူတွေက ပြင်ဆင်ရင်းနဲ့ ဘာသာတစ်ခုဟာ နဂိုမူလ ကနေ လွဲချော်သွားတတ်တယ်။ (ဒီခေါင်းစဉ်က နည်းနည်း ထိလွယ်ရှလွယ်တယ်။ မှတ်ချက် ရေးရတာ နည်းနည်း လန့်လို့။ ဘယ်သူနဲ့မှ မငြင်းလို ပါဘူး။ အားလုံးမေတ္တာ ထားနိုင်ရင် ကောင်းတာပါပဲ။)
Taungoo September 24, 2008 at 7:33 AM
TNS September 24, 2008 at 10:08 AM
g September 25, 2009 at 9:04 AM
U r good writer but not good thinker.
tat tar twayakone htote write par byar.. maw lar yin lae pyaw Pepsi tot sprite tot ma tite naing bu. but yee sa yar tot taw taw kg tayy...
khin byar tat ti tot nae tay naw..
ae lo pyaw ya mhar taung kya naw win lay tay :P
ဆူး so tar traditional languageanay nae. so yin tot - pussy pop byar so tot (ဆူးပြတိုက်) so yin bar gye lae ?
name tot change lite par byar
yee sa yar gyi phyit nay lo. par
g September 25, 2009 at 9:25 AM
ကိုယ်ထင်တိုင်း ပုံသေကြီး မစွပ်စွဲပါနဲ့ဗျာ.. ပြန်မေးခွင့်မရှိတဲ့ ဘာသာဆိုပြီး ပြောမယ်ဆို.. အိန္ဒိယနိုင်ငံက နာမည်ကျော် ဒေါက်တာ ဇကရ် နိုင်ငံတကာလှည့်ပြီး ဘာသာခြားပညာရှင်တွေရဲ့ စိန်ခေါ် မေးမြန်းမှု မှန်သမျှကို ဖြေပေးနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး.. ဒီတော့ တစ်ဖက်တည်း အမြင်နဲ့ မရေးနဲ့ဗျာ... မျက်မမြင် ၆ ယောက် ဆင်စမ်းသလို ဖြစ်နေတယ်... သိပံနည်းအရ မှားနေတယ် ဆိုရင်လည်း သေးသေးမွှားမွှားလေး ရေသောက်တာကအစ၊ (နားနဲ့မနာ ဖ၀ါးနဲ့နာပါ) ရှင်ပြုတာကအဆုံး အစ္စလာမ်တရားတော်အရ လမ်းညွှန်ချက်တွေကို ကမ္ဘာက ဒေါက်တာတွေ၊ သိပံပညာရှင်တွေ ဘယ်လို စမ်းသပ်ပြီး ဘယ်လို မှန်ကန်ကြောင်း လက်ခံထားတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျား မကြားဖူးလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်... ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဒုတိယအများဆုံး ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာ ဖြစ်တဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာကို ကိုးကွယ်နေသူတွေက ခင်ဗျားပြောသလိုဆို ဘာမှ မသိဘဲ မျက်ကန်း ကိုးကွယ်နေသူတွေပေါ့... အဟက်.. ငယ်ဘ၀ ဆိုပေမယ့်လည်း ကြည့်ကျက်လည်း ရေးပါဗျာ... ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကလည်း နီးလာပီဆိုတော့ ထင်ယောင်ထင်မှားတောင် ဖြစ်မိတယ်... :) :)
(p.s- change your blog name . :P "SU" ???)
Than Htun September 13, 2010 at 5:32 AM
ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုဝေဖန် ဝေဖန်ပါစေ အခုခေတ်မှာ ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ရေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုပိုင်ခွင့်ရှိတယ် ဘာသာတရားတစ်ခုကို မျက်စိမှိတ်ယုံမှ လူရာဝင်မဲ့ခေတ်လဲမဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ကိုယ်ရေးတာ ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်ပဲ။ ဆက်ရေးဗျာ အားပေးတယ်။ ကျုပ်ကိုယ်လဲ မှန်တာကိုပဲ မြတ်နိုးတယ်
အမှန်တရားမြတ်နိုးရာမှာ အဲဒီအမှန်တရားကို ထုတ်ဖေါ်ခွင့်လဲရှိရမယ်။ အားပေးတယ် ဗျာ ဆက်ရေးပါ။